တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နှင့် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာန စစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Li Zuocheng ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကွမ်ကျိုးမြို့ရှိ Baiyuan လေဆိပ်မှပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ ဒုတိယဌာနချုပ်မှူး Maj. Gen. Tao Guang၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ်တင့်ဆန်းနှင့် တရုတ် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက လေဆိပ်တွင်ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိကြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့် တာဝန်ရှိသူများကလေဆိပ်တွင် ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများပြန်လည် လိုက်ပါလာကြပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ Mr. Xi Jinping နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ အကြီးအကဲများ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ကြည်းတပ်သံချပ်ကာ လေ့ကျင့်ရေးသင် တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်းနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ဗဟိုစဈကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျနှငျ့ ပူးတှဲစဈဦးစီးဌာန စဈဦးစီးခြုပျ Gen. Li Zuocheng ၏ဖိတျကွားခကျြအရ တရုတျနိုငျငံ၊ ကှမျကြိုးမွို့တှငျ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ သညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ကှမျကြိုးမွို့ရှိ Baiyuan လဆေိပျမှပွနျလညျထှကျခှာကွ သညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးကှပျကဲမှုဌာနခြုပျ၊ ဒုတိယဌာနခြုပျမှူး Maj. Gen. Tao Guang၊ တရုတျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးသဈလငျးအုနျး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျတငျ့ဆနျးနှငျ့ တရုတျ ပွညျသူ့လှတျမွောကျရေး တပျမတျောမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားက လဆေိပျတှငျပို့ဆောငျ နှုတျဆကျ ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ နပွေညျတျောလဆေိပျသို့ရောကျရှိကွရာ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ကြျောဆှေ၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျော တိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားကလဆေိပျတှငျ ကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလိုကျပါသှားသညျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး) မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားပွနျလညျ လိုကျပါလာကွပွီး ခရီးစဉျအတှငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ Mr. Xi Jinping နှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး၊ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောမှ အကွီးအကဲမြား နှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး၊ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျော ကွညျးတပျသံခပျြကာ လကေ့ငျြ့ရေးသငျ တနျးကြောငျးသို့ သှားရောကျလလေ့ာခွငျးနှငျ့ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြားအား လှညျ့လညျကွညျ့ရှုလလေ့ာခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။